Topnepalnews.com | सेयरबजार किन लाग्यो अचानक ओरालोमा ?
सेयरबजार किन लाग्यो अचानक ओरालोमा ?
Posted on: August 09, 2016 | views: 337
काठमाडौं,साउन २५ । सेयरबजार परिसूचक नेप्से इतिहासकै सबैभन्दा उच्च अंकले घटेको छ । सोमबार नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा ८८ दशमलव ८१ अंक (५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत) घटेको छ । नेपाली सेयरबजारको दुई दशकको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै पनि यति उच्च अंकले घटेको थिएन ।
सोमबार सर्किट बे्रकर लगाएर बजार बन्द गर्नुअघि नेप्से परिसूचक १ हजार ६ सय ७५ दशमलव ९१ अंकमा पुगेको थियो । सोमबार बजार सूचकांकले कीर्तिमानी अंकको गिरावट व्यहोरेपछि नेप्सेले तत्कालका लागि लगातार उकालो लाग्ने सिलसिला गुमाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । नेप्से अघिल्लो सातादेखि नै घट्दो प्रवृत्ति (बियरिस ट्रेन्ड)मा छ । अघिल्लो साताको बुधबार (१२ साउन) नेप्से १ हजार ८ सय ८७ अंकमा पुगेर ओरालो लाग्न थालेको थियो ।
पछिल्ला महिनामा औसत करिब २ अर्ब रुपैयाँको दैनिक व्यापार भएको नेप्सेमा सोमबार ८७ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा कमको सेयर व्यापार भयो । कारोबार संख्या पनि औसत १० हजारबाट झरेर ४ हजार ८ सयमा पुगेको छ । यस दिन नेप्सेमा १ सय ३० कम्पनीको ११ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर व्यापार भयो ।
‘अहिले बजार घट्नुमा नियामक निकायको हस्तक्षेप मूल कारण हो,’ हाथवे इन्भेष्टमेन्टका महाप्रबन्धक अम्बिकाप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘बाह्य र आन्तरिक पक्ष निकै बलियो अवस्थामा रहेकाले समग्र बजार अझ धेरै घट्ला भन्ने लाग्दैन ।’
हालै नियामक निकाय सेबोनले बजारमा कालोधनको प्रयोग भएको भन्दै अनुसन्धान थाल्न समिति बनाएको छ । सेबोनले पटक–पटक लगानीकर्तालाई सचेत हुन चेतावनीपूर्ण सन्देश दिएको छ । यी कारणले नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्दा बजार घटेको विश्लेषण छ । सेयर लगानीकर्ता संघले नियामक निकायका भूमिकामाथि आपत्ति जनाएको थियो । आजको नाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।